IiNduli zaseLonginezz (Amagumbi Amabini) - I-Airbnb
IiNduli zaseLonginezz (Amagumbi Amabini)
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguThe Happinezz Hills
Ihotele i-The Imperinezz Hills yihotele encinci ekwinduli, engqongwe yindalo kwaye yenza ulwandle nokutshona kwelanga kube mnandi.
Iinduli zaseKarimunjawa zinamagumbi ayi-16, zonke zihonjiswe ngezinto nemibala ngokusekelwe kwindalo yaseKarimunjawa, ezi zinto ziilwandle, indalo nokutshona kwelanga. Igumbi ngalinye linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iTV, ifriji, iwardrobe, ibhedi enkulu eyi-1 okanye iibhedi ezimbini ezibini, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa eshushu, indlu yangasese esentshona ibe igumbi ngalinye line-terrace okanye ibhalkhoni.
Ihotele inechibi lokuqubha elinendawo yokuqubha, evulekileyo imini yonke ibe emini uyakwazi ukuqubha ngoxa ukonwabela ukutshona kwelanga uze uode iziselo ezisandul 'ukuvunwa kwiibhari zephuli. I-WI-FI yasimahla iyafumaneka kuzo zonke iindawo zehotele kwaye kukho indawo yokupaka esimahla kunye neemoto.
Isidlo sakusasa siqukiwe kwixabiso legumbi. Ukongezelela, unokuoda ukutya kwaseAsia naseNtshona kwivenkile yethu yokutyela isidlo sasemini kunye/okanye isidlo sangokuhlwa. Nina bafuna ukonwabela intlanzi esandul 'ukulotywa eKarimunjawa sineephakheji ezikhethekileyo zokoja inyama. Kubantwana sinezinto ezifumanekayo ezifana nezitulo zabantwana kunye nendawo yokudlala.
Ukuba ufuna ukwenza ukhenketho olumnandi sinokulungiselela zonke iintlobo zokhenketho ezifana nokubhukuda ngephenyane, ukudayiva nokunyuka intaba okanye ukunyuka intaba. Singazilungiselela izinto ezincinci, imoto yabucala enomqhubi, izinto zokuntywila, ii-hammock, iibhegi zokomisa okanye ikhamera engaphantsi kwamanzi. Ngaba udinga itikiti lesikhephe ukuya nokubuya eKarimunjawa okanye isithuthi ukusuka okanye ukuya kwizixeko eziliqela ukusuka nokuya eJepara okanye eSemarang, siyakuvuyela ukukulungiselela oku.
IHotel The Imperinezz Hills ikwiikhilomitha eziyi-3 ukusuka ezibukweni, iikhilomitha eziyi-2 ukusuka embindini wedolophu, iikhilomitha eziyi-3 ukusuka kumalwandle amahle eKarimunjawa kunye neekhilomitha eziyi-15 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya iKarimunjawa. Xa iceliwe Iinduli zaseLonginezz zingalungiselela ngaphandle kokubhataliswa imali eyongezelelekileyo yokuyithatha okanye yokuya ezibukweni okanye kwisikhululo seenqwelo-moya.
Iinduli zaseKarimunjawa zinamagumbi ayi-16, zonke zihonjiswe ngezinto nemibala ngokusekelwe kwindalo yaseKarimunjawa, ezi zinto ziilwandle, indalo nokutshona kwelanga. Igumbi ngalinye linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, iTV, ifriji, iwardrobe, ibhedi enkulu eyi…
Umbuki zindwendwe ngu- The Happinezz Hills